Maitiro Ekumisa Akaunti Yangu Pane Iyo Twitter Webhu? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 517
Para Bvisa Akaunti yako paWebhu, Twitter Mushandisi: Inoda kupinda muAkaunti yako yePeriscope, tinya pane yako Mbiri icon uye sarudza Zvirongwa kubva pop-up menyu, tinya paDzvanya account.
Mushure mekubaya Deactivate account, yakarongeka dialog box inoonekwa pachiratidziri, iyo Twitter Mushandisi inodzvanya Deactivate account kuti isimbise kumiswa kweAccount. Kana kese maitiro apera, Mushandisi haasisina nhoroondo yeTwitter inoshanda.
Kana iye Mushandisi we Twitter achisarudza Regedza account, anobvunzwa kusimbiswa kwesarudzo yako kudzima. Kana iwe ukasarudza Kurodha Pachedu Dhata, chiratidzo chekutakura chinobuda apo chikumbiro chako chiri kugadziriswa; wapedza chikumbiro chako uye wotanga kurodha pasi faira rine data rako.
Buda muAcciscope Account yangu
Kana iyo Twitter Mushandisi akarasikirwa nharembozha yake uye unofanirwa kubuda muAkaunti yako yePeriscope; Nechinangwa ichi, iwe unofanirwa kutevedzera maitiro aya: Tevedzera nhanho neiyo iOS kana Android chishandiso; Kana iwe wakapinda muPeriscope neAkaunti yeTwitter, enda kumasaiti epaTwitter paPC yako.
Sarudza Revoke inoenderana kuwana kwePeriscope; Sarudza Regedza kupinda paTwitter yeIOS kana Twitter yeApple, izvi zvinoenderana nechishandiso chine Mushandisi. Mushure mekurodha pasi Periscope application pane yako nharembozha, pinda muPeriscope Account.
Pakupedzisira, sarudza Mbiri, Kugadziriswa uye Kuvhara chikamu pane zvese zvishandiso. Zvino izvo iyo Twitter Mushandisi yateedzera neese maitiro ekuti abude kunze kwePeriscope Account, iye ane sarudzo yekupinda mukati pane yake nhare mbozha.
Gadzira TWITTER STREAM
Para gadzira Rukova, Iyo Twitter Mushandisi inofanirwa: Dzvanya paTransmission tebhu, tinya paGadzira kutapurirana, pinda inodiwa minda: Chinotakurisa zita, Chikamu: Ungatsanangura sei kutumira kwako? uye tsime.
Iyo Twitter Mushandisi inoda kusarudza a Kunzwa sarudzo: Veruzhinji kana zvakavanzika; sarudza iyo Sarudzo sarudzo: Tanga nekukasira kana kutanga gare gare; vhura Advanced Zvirongwa; vhura Zvemukati Zvirambidzo: Sanganisira kana Bvisa.
Embed vhidhiyo kubva pane encoder kuenda kunobva uye tarisa kuti wekutanga mugadziri anoratidza vhidhiyo; Nekudzvanya paGadzira kutapurirana, iyo Twitter Mushandisi ine sarudzo yekusarudza: Kutanga nekukurumidza kana Kutanga gare gare.
Tweet uye upedze Kutumira pa Twitter
Pane iyo Twitter chikuva, Mushandisi ane sarudzo yeku Tweet Nhepfenyuro, kuteerera kune inotevera nzira: Dzvanya pane Yekutumira tebhu; tinya pane nhepfenyuro iripo; Dzvanya pane bhatani reTweet uye iwe wagadzirira kuenda online.
Nezve gumisa Kufambisa, iyo Twitter Mushandisi inoda kutevedzera maitiro aya: Dzvanya paTransmission tebhu, tinya pane iripo hutachiona, enda pasi pezasi reiyo yekuzivisa mawindo hwindo.
Kuti uvhare, iyo Twitter Mushandisi inodzvanya pane iyo Pedzisa bhatani; Kana zvese zvinodikanwa zvemaitiro zvazadzikiswa, kuendesa kwayo kunozobudiswazve paTwitter kuti vafare vese vashandisi veTwitter papuratifomu yeTwitter.
1 Buda muAcciscope Account yangu
2 Gadzira TWITTER STREAM
3 Tweet uye upedze Kutumira pa Twitter